डा. केसीको जीवन रक्षा माग गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माको टिचिङमा धर्ना « AayoMail
डा. केसीको जीवन रक्षा माग गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माको टिचिङमा धर्ना
विगत २२ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग र उनको जीवनरक्षाको माग गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासहितको टोलीले टिचिङ अस्पताल परिसरमा धर्ना दिएको छ। सोमबार बिहान डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न गएका शर्माले केसीलाई भेटिसकेपछि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अस्पताल परिसरमा आधा घन्टाजति धर्ना दिएका हुन्।
सिंगो देशका नागरिकको स्वास्थ्यका लागि उठाइएका मुद्दा सरकारले पूरा नगरे अब त्यो मागभित्र समेटिने सबै जनता सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको बताए। ‘म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहान्छु। यदि सिंगो जनता नै सडकमा आए भने, त्यसपछिको परिणाम स्वयम् सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ,’ शर्माले भने।
समय सुहाउँदो के हो त?
‘१८औं दिनमा सरकारका तर्फबाट यो अनशन समय सहाउँदो नभएको भन्ने अभिव्यक्ति आयो, त्यसो भए समय सुहाउँदो के हो त?,’ उनले भने, ‘सम्भु सदाहरु छट्पटाएर अस्पतालको चहार्दै उपचार नपाउँदै गर्दा, खाडीमा बसेका नागरिकले देश फर्किन नपाउँदै गर्दा, अस्पताल अस्पताल डौडाएर आमाको मृत्यु हेर्दै गर्दाको दृश्य छोराछोरीले हेर्दैगर्दा बालुवाटारमा सत्ताका लागि द्वन्द्व भएको थियो के त्यो समय सुहाउँदो थियो?’
उनले कोरोना उपचारका नागममा भएको भ्रष्टाचार, सांसद अपहरण, कात्रोमासमेत भ्रष्टाचार भएको खबर आइरहँदा के समय सुहाउँदो थियो भन्दै प्रश्न गरे। उनले जायज मागहरु सम्बोधन गर्नुको साटो समय सुहाउँदो छैन भन्दै डा. केसीलाई चुनौती नदिने सरकारसँग आग्रह गरे।
‘यदि समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने, त्यसपछिको जे दुष्परिणाम हुन्छ। त्यसको जिम्मेवार सरकार र सम्मानीय केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ,’ उनले चेतावनी दिए।